चीन पोर्टेबल जस्ता मिश्र धातु ह्यान्डल मसाज निर्माता र आपूर्तिकर्ता - SunBright टेक्नोलोजी
घर > उत्पादनहरू > सौन्दर्य हेरचाह उपकरणहरू
पोर्टेबल जस्ता मिश्र धातु ह्यान्डल मसाज
हामी उत्कृष्ट डिजाइन र उच्च गुणस्तरको सतह उपचारको साथ पोर्टेबल जस्ता मिश्र धातु ह्यान्डल्ड मसाज आपूर्ति गर्दछौं। अनुहारको रोलर मसाज उपकरण2राउन्ड मसाज हेडहरूसँग डिजाइन गरिएको, अद्वितीय 3D "V" प्रकारको डिजाइन तपाईंको अनुहारको हरेक कुनामा राम्रोसँग फिट हुन सक्छ। पोर्टेबल साइज, तपाईं यसलाई जहाँ गए पनि लैजान सक्नुहुन्छ। सनब्राइट एक ISO 9001 र AS 9100 प्रमाणित निर्माता हो र एक उच्च-प्रविधि उद्यम हो जसले R&D, उत्पादन र उच्च-अन्तका उत्पादनहरू र सटीक घटकहरूको बिक्रीलाई एकीकृत गर्दछ। उच्च गुणस्तरको मागहरू पूरा गर्न, हामीसँग विस्तृत गुणस्तर नियन्त्रण प्रणाली र पूर्ण-सुसज्जित मापन उपकरणहरू छन्। हाम्रो व्यावसायिक व्यवस्थापन टोलीसँग बलियो प्राविधिक पृष्ठभूमि र उत्कृष्ट व्यवस्थापन प्रणाली छ।
पोर्टेबल जिंक मिश्र धातु ह्यान्डल्ड मसाज चिल्लो सतह, टिकाउ र तपाईंको छाला छुँदा आरामदायी गुणस्तरको धातु मिश्रबाट बनेको छ।
उपकरण चाँदीको रंग, चम्किलो र सुरुचिपूर्ण छ।
फेस रोलरको दैनिक प्रयोगले तपाईको अनुहार र छालालाई चाउरीपना कम गरी कालो घेरा हटाएर जवान देखिनेछ। यसबाहेक, यसले तपाईंको रक्त परिसंचरणलाई उत्तेजित गरेर छालाको मेटाबोलिज्म बढाउनेछ, जसको परिणामस्वरूप तत्काल अनुहार लिफ्ट हुन्छ।
साथै, यो छाला हेरचाह उत्पादनहरु संग संयोजन र राम्रो अवशोषण को बढावा दिन सक्छ।
2उत्पादन सुविधा र आवेदन
पोर्टेबल जिंक मिश्र धातु ह्यान्डल्ड मसाज २ राउन्ड मसाज हेडहरूसँग डिजाइन गरिएको, अद्वितीय 3D "V" प्रकारको डिजाइन तपाईंको अनुहारको हरेक कुनामा राम्रोसँग फिट हुन्छ।
पोर्टेबल साइज, तपाईं यसलाई जहाँ गए पनि लैजान सक्नुहुन्छ।
तपाईंको आमा, हजुरआमा, श्रीमती, छोरी, बहिनीको लागि उत्कृष्ट छाला हेरचाह उपहार साथै जन्मदिन, भ्यालेन्टाइन डे, आमाको दिन, महिला दिवस र क्रिसमस जस्ता विशेष अवसरहरूको लागि उत्तम उपहार।
पोर्टेबल जिंक अलॉय मेटल ह्यान्डल्ड मसाजलाई फ्रिजरमा राख्नुहोस् र हाम्रो आँखा क्रीम मसाजर स्टिकको फ्रोजन टचले तपाईंको छालालाई जगाउनेछ, बिहान पफिनेस र कालो घेराहरू हटाउन मद्दत गर्दछ।
3. उत्पादन विवरणहरू
नयाँ घुँडा टेक्नोलोजीको साथ, पोर्टेबल जिंक मिश्र धातु ह्यान्डल गरिएको मसाजले संवेदनशील छालालाई राहत दिन्छ, अनुहार लिफ्ट छालालाई कडा बनाउँछ, शरीरको आकार दिन्छ, र रक्तसञ्चार सुधार गर्छ, तनाव कम गर्छ, झुर्रियाँ कम गर्छ, स्ट्रेच मार्कहरू फेड गर्छ!
तपाईंको सबै छाला हेरचाह उत्पादनहरूको लागि परम एन्टी-एजिंग उपकरण।
हाम्रो फेस बडी फेसियल स्किन केयर उपकरणहरू तपाईको सबै छाला हेरचाह उत्पादनहरू जस्तै बुढ्यौली रोक्न, छाला कडा पार्ने, शरीरको लागि राम्रो, अनुहार, हात, खुट्टा, नितम्ब र पछाडि यसले अनुहार स्लिमिङको प्रभाव प्राप्त गर्न सक्छ।
एर्गोनोमिक रूपमा डिजाइन गरिएको मसाज मोती, शरीरको कुनै पनि भागलाई मसाज गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
प्याकेज मानक निर्यात प्याकेज हो।
सबै प्रकारका ढुवानी तरिकाहरू एक्सप्रेस, हावा र समुद्र द्वारा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
हट ट्याग: पोर्टेबल जस्ता मिश्र धातु ह्यान्डल मसाज, अनुकूलित, थोक, चीन, कम मूल्य, गुणस्तर, टिकाऊ, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, मूल्य, उद्धरण
पोर्टेबल जेड रोलर फेसियल मसाज उपकरण